प्रस्तुति स्लाइहरूमा वस्तुहरू एनिमेट गर्दा
तपाईँको स्लाईड वस्तुहरूमा तपाईँ प्रिसेट एनिमेसन प्रभाव लागू गर्न सक्नुहुन्छ ।
वस्तुमा एनिमेसन प्रभाव लागू गर्न:
स्लाईडमा साधारण दृश्यमा, वस्तु चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ एनिमेट गर्न चाहनुहुन्छ.
थप संबादमा, ट्याब पृष्ठ क्लिक गर्नुहोस् प्रभावहरूको कोटिबाट छनौट गर्न. प्रभाव क्लिक गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् ठीक छ
एनिमेसन पूर्वदृश्यका लागि, प्ले बटन क्लिक गर्नुहोस् ।
वस्तुबाट एनिमेसन प्रभाव हटाउनका लागि:
स्लाईडको साधारण दृश्यमा, वस्तु चयन गर्नुहोस् जहाँ तपाईँ प्रभाव हटाउन चाहनुहुन्छ ।
रोज्नुहोस् स्लाईड प्रदर्शन - अनुकूल एनिमेसन
स्लाईड कारोवारहरू एनिमेट गर्दा
Title is: प्रस्तुति स्लाइहरूमा वस्तुहरू एनिमेट गर्दा